आज खण्डग्रास चन्द्रग्रहण : कुन राशीलाई कस्तो असर ? – Daunne News
लागुऔषध सहित बर्दघाटका दुई जना पक्राउ
आज खण्डग्रास चन्द्रग्रहण : कुन राशीलाई कस्तो असर ?
By Daunne News	 Last updated Jul 21, 2019
मंगलवार खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दैछ। यो चन्द्रग्रहण नेपालमा मंगलबारको राति १:४६ मा सुरु भएर बिहान ४ः४५ समाप्त हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा प्रकाशित पञ्चाङ्गहरूमा उल्लेख छ। यो ग्रहण कुल २ घण्टा ५९ मिनेटको हुनेछ।
यौनवर्धक औषधि भियाग्राको असर धेरै भयो भने ‘के गर्ने र ?
मंसिर २२, २१:२१